Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguВера
Kwindawo ebukekayo yommandla waseMoscow (isithili sase-Istra, iikhilomitha ezingama-23 ukusuka eMoscow), ejikelezwe yihlathi, i-SPA cottage (i-sauna, i-Hammam yaseTurkey) enendawo yonke ye-250 sq. M. 4 amagumbi okulala (2-ibhedi , 2-ebhedini, 2-ukuzichamela wendawo 4 umandlalo-imigangatho 3 3 zangasese Jacuzzi, itheyibhile yokuthanjiswa Ekhaya Cinema, uMyili elingaphakathi, ukulungiswa ezikumgangatho ophezulu, oqinileyo ifenitshala Beautiful ummandla ka 4 square metres kunye kwindawo kwiindawo, ibala lezemidlalo 30 * 10 m, itheyibhile intenetya, mini-ngelaphu, kwiKona abantwana.
Ingcamango enomdla yendlu yeholide ehloniphekileyo, kunye nokuqhuba iisemina ezingaphandle kwedolophu kunye nezifundo. Kukho igumbi lokuhlala elikhulu elinetafile enkulu engqukuva yabantu abasi 8 kunye ne plasma enkulu eludongeni Onke amagumbi enziwe ngendlela eyiyo yoyilo. Indawo ye-spa ibandakanya i-sauna kunye ne-Turkish Hamam (intlawulo eyongezelelweyo) kukho i-Jacuzzi.
Ifenitshala eqinile, yendalo. Umoya opholileyo wasekhaya. Ukongeza, kunokwenzeka ukucwangcisa ukucoca kunye nokulungiselela isidlo sakusasa. Indawo yokuhlala ukuya kuthi ga kwi-10 yeendwendwe ubuninzi. Indawo yokupaka egadiweyo. Kwiimitha ezili-10 kukho ihlathi, umlambo, indawo yezemidlalo enomhlaba oyisanti olinganisa i-10m * 30m kunye ne-badminton net (ehlotyeni) Kukho i-simulator yezemidlalo (ehlotyeni) itafile ye-tennis (ehlotyeni) iibhilidi ezincinci. Ukusetyenziswa simahla.
Indawo yokupaka simahla eseyadini – ineendawo eziyi-7
I-cottage yethu ibekwe kwindawo ekhethekileyo ngokwenene kwingingqi yaseMoscow. Sijikelezwe liqela elikhulu leetempile kunye nezikhumbuzo zembali. Lo nguMda woBuqaqawuli, indawo apho uhlaselo lwaseMoscow lwamiswa kwiMfazwe yesibini yeHlabathi. Ngoku kukho imyuziyam kunye nomboniso wezixhobo zetanki. Lo nguMzi Woonongendi weYerusalem eNtsha, ikopi kanye yoko kwaSirayeli. Ngoku i-monasteri yakhiwe ngokutsha kwaye yabuyiselwa ngokupheleleyo. Enye iperile yethu yiZvenigorod, isixeko esinembali enkulu kunye nenani elikhulu lezinto ezikhangayo. Ukuhlala nathi, unokudibanisa ishishini kunye nolonwabo: uphumle kakhulu kwaye ufunde izinto ezininzi ezinomdla malunga nommandla wethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Вера
Indlu ikhululekile ukususela ngoJuni 1, 2019. Ndiphendula ngokukhawuleza ngeVotsap, i-sms, i-imeyile. Ungafowuna. Ndiza kukuxelela ngokubanzi malunga nendlu kunye neemeko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Istrinsky District